Hay’daha SOS Children’s Village Somalia, 1% Club, SOS Children’s Village Netherlands waxa ay si wada jir ah u fulinayaan mashruuca Next Economy iyaga oo tababaro siinaaya dhalinyaradda caqabaduhu ka heystaan in ay ku xirmaan suuqyada shaqada ama u baahan in laga caawiyo si ay shaqo fiican u helaan ama ay u bilaaban lahaayeen ganacsigooda gaarka ah.
Hay’adaha SOS Children’s Village Somalia, 1% Club, SOS Children’s Village Netherlands waxa ay ku wargelinayaan dhammaan dhalinyaradda Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyaradda ku nool Magaalada Muqdisho in uu billaabanaayo qaadashada dufcadii 2aad ee mashruuca Next Economy II oo dhalinyaradda ka taageeridoona dhinacyada shaqo abuurka iyaga oo qaadandoona tababaro kala duwan muddo seddex biilood ah, Tababaradaas oo ku saabsan;
Mashuurca “Next Economy” oo soo bilowday 2016-kii ilaa iyo Hada waxaa ka faa’idaystay dhalinyaro isugu jira Gabdho iyo Wiilal oo tiro ahaan gaaraaya 800 oo Qof. Sannadkan 2020 waxaa la qaadanayaa dufcadii labaad (Batch 2) oo tiro ahaan gaaraaya 121 (gabdho iyo Wiilal isugu jira).
Dugsi farsamada gacanta–Ku jira/ dhamaystay
Haddii aad danaynayso fursadaan, fadlan raac linkgan:
QABASHADA CODSIYADA WAXEYKU EGTAHAY 10 DECEMBER 2020
Wixii faahfaahin intaasi dheer fadlan Booqo Website: www.next-economy.com ama kalasoo
FG. Fadlan qofkii horey ugasoo qeybqaatay trainingkan yuusan dib usoo codsan